"Indro, fahamarinana ao am-po no sitrakao." Salamo 51:6
"Amoròny fo madio aho, Andriamanitra ô; ary havaozy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko." Salamo 51:10
Fahiny, fony mbola volafotsy tsy mifangaro no nanamboarana ny vola fampiasa, dia nisy fomba tsotra nanamarinana fa tsy sandoka ilay izy. Nalatsaka tamin’ny tany fotsiny, ary nohenoina ny feo avoakany rehefa mitontona. Raha sandoka ilay vola, tsy nasiana afa-tsy ankoso-bolafotsy, dia tsy mikarantsana. Fa ny vola tena izy dia maneno “tsara”, satria volafotsy hatrany anatiny fa tsy eo ivelany fotsiny.
Tandremo! Mety ho kristiana “ankosotra” ihany isika. Mba misy fahamarinana hita ivelany ihany eo amin’ny fiainantsika, ary mifanaraka amin’izay voalazan’ny Baiboly ny tenintsika. Fa manao ahoana kosa ny ao anaty fontsika lalina ao? Ny tena toetrantsika dia fantatra amin’ny fanenon’ny fianjerantsika. Inona no mitranga rehefa mianjera isika, izany hoe rehefa tafalatsaka ao anaty toe-javatra tsy nampoizina na manahirana, na ao anaty fakam-panahy? Inona no ataontsika rehefa tsy manana fotoana na hery amboamboarana fihetsik’olona mpivavaka? Maneno “tsara” ve ny fiainantsika? tsy miovaova faneno, na ao an-trano, na any am-piasana, na irery tsy misy mahita na mahare? Inona no miafina ao an-tsaintsika ao rehefa mandefa eritreritra?
Raha nanontaniana Jesosy, Ilay ohatra ho antsika, hoe: “Iza moa Ianao?”, dia hoy Izy: “Ilay nolazaiko taminareo hatramin’ny voalohany” (Jaona 8:25). “Ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro” (Salamo 17:3).